Shesh Dahal's Blogs: स्वास्थ्य सेवा करको बिस्तृत अप्रेसन
स्वास्थ्य सेवामा मु.अ.क. पनि लाग्छ ?
मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ (संसोधन सहित) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य जुनसुकै किसिमको स्वास्थ्य सेवामा मुल्य अभिबृद्धि कर छुट गरिएको छ । अर्थात कुनै स्वास्थ्य संस्था मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएमा उसले स्वास्थ्य सेवा बिक्रि गर्दा मुल्य अभिबृद्धि कर लगाएर मात्र सेवा बिक्रि गर्नु पर्दछ भने सो संस्था मु.अ.क.मा दर्ता नभएमा सो सँस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मु.अ.क. लाग्दैन ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यक्ति तथा निकाय कानुन अनुसार मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनैपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था छैन । तर कोहि स्वेच्छाले मु.अ.क.मा दर्ता हुन्छु भन्दै कर कार्यालय गयो भने चाँहि ऊ मु.अ.क. मा दर्ता हुन पाउने ब्यबस्था कानुनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार देशका धेरै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु मु.अ.क.मा दर्ता भएका छन् र आफुले बिक्रि गर्ने सेवामा मु.अ.क. असुल गर्दछन् ।
के थियो त गत बर्ष सम्मको ब्यबस्था ?
“मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।” भन्ने ब्यबस्था गत बर्षको आर्थिक ऐनमा रहेको थियो । सो ब्यबस्थालाई टेक्दै करदाताहरुले बिरामीसँग मुल्य अभिबृद्धि कर मात्र असुल गर्दथे । स्वास्थ्य सेवा कर असुल गर्दैनथे । त्यहि बानीलाई निरन्तरता दिदै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने केहि ब्यक्ति तथा निकायले २०७३ श्रावण १ पछि पनि मु.अ.क. मात्र उठाउदै आईरहेका छन् स्वास्थ्य सेवा कर उठाईरहेका छैनन् ।
के छ त नयाँ ब्यबस्था ?
नयाँ ब्यबस्थाले माथि उल्लेखित पुरानोे ब्यबस्थालाई खारेज गरेको छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, मुअकमा दर्ता भएको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा करको अतिरिक्त मु.अ.क. समेत उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
के अब स्वास्थ्य सेवा कर र मु.अ.क. दुबै कर लाग्छ ?
यो बर्षको आर्थिक ऐनले गरेको मु्ख्य परिबर्तन पनि यसैसँग सम्बन्धित छ । आर्थिक ऐन, २०७३ ले गरेको यो स्वास्थ्य सेवा कर सम्बन्धि ब्यबस्था श्राबण १ देखि लागु भएको हो । यसको अर्थ आर्थिक ऐन, २०७३ लागु भएपश्चात मु.अ.क.मा दर्ता हुने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा करका अतिरिक्त नियमानुसार मु.अ.क. पनि संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ब्यबस्था २०७३ श्रावण १ पछि दर्ता भएका सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरुन्त लागु हुन्छ । तर गत बर्षको आर्थिक ऐनले दिईसकेको सुबिधा हालको आर्थिक ऐनले खारेज गर्न नमिल्ने भएकाले गत आर्थिक बर्षसम्म त्यसबेलाको कानुन अनुसार दर्ता भएका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले भने मुअकमा दर्ता भएको मितिले ५ बर्ष सम्म मुल्य अभिबृद्धि कर मात्र उठाए पुग्दछ, स्वास्थ्य सेवा कर असुल गर्नु पर्दैन ।
सेवा प्रदायक मु.अ.क.मा दर्ता हुँदा कि दर्ता नहुदाँ फाईदा ?
यो प्रश्नको उत्तर ठ्याक्कै यही नै भन्ने हुदैन । तपाईको ब्यबसायको प्रकृति अनुसार यसको फाईदा बेफाईदा फरक फरक हुन्छ । यदि तपाई मु.अ.क.मा दर्ता हुनु भयो भने तपाईले बेच्ने सेवा महंगो पर्न जान्छ । तर, मु.अ.क.मा दर्ता हुँदा तपाईले खरिदमा तिरेको मु.अ.क. सोझै दावी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईको लागत केहि हदसम्म कम गराउन सहयोग गर्दछ । त्यसैले व्यबसायको प्रकृति अनुसार तपाई मु.अ.क.मा दर्ता हुने कि नहुने निर्णय गर्दा उचित हुन्छ ।
पहिले मु.अ.क.मा दर्ता भएकाले मु.अ.क.बाट निस्कन खोजेमा ऐनले तोकेका प्रकृयाहरु पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । जस्तै कि मु.अ.क. दाबी गरेको सम्पत्तिहरु बजार मुल्यमा बिक्रि गरेको मानी सो रकममा लाग्ने मु.अ.क. सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ भने आन्तरिक राजस्व बिभागले तोकेका अन्य प्रकृया पुरा गरिसकेपछि मात्र मु.अ.क.बाट निस्कन पाईन्छ । मु.अ.क.मा दर्ता भईरहेको अबस्थामा भने आफुले बिक्रि गर्ने हरेक सेवाहरुमा अनिबार्य रुपमा मु.अ.क. संकलन गरी बिजक जारी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
नयाँ ब्यबस्था अनुसार जनताले मु.अ.क.मा दर्ता भएको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिदाँ चर्को कर तिर्नुपर्ने भएको छ । पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर र सो कर समेत जोडिएको रकममा तेह्र प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक सय रुपैयाको उपचार गराउदाँ रु एक सय अठार रुपैया पैसठ्ठी पैसा तिर्नुपर्दछ । यस प्रकार हेर्दा १८.६५ प्रतिशत कर राज्यले एउटा बिरामीबाट उठाउनेछ । तर मुअकमा दर्ता नभएको सेवा प्रदायकबाट सेवा लिएमा भने ५ प्रतिशत मात्र कर राज्यले पाउनेछ ।